नारायणकाजी माओवादी नै हैनन्, खोल मात्र ओढेका हुन्: भट्टराई |
गोरखा । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गोरखा क्षेत्र न. दुईबाट चुनाबी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि यतिबेला गोरखाको चुनाबी माहोल कडा बन्दै गएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा गोरखा २ बाट नयाँ शकति नेपालबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका डा. बाबुराम भट्टराईले चुनावी प्रचारलाई तिब्रता दिएका छन्।
चुनावी अभियानको क्रममा गोरखाको बारपाकमा जनतालाई संबोधन गर्न पुगेका डा. भट्टराईले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नाराणकाजी श्रेष्ठलाई माओवादी नभएको दाबी गरेका छन् । ‘जनयुद्ध हामीले गर्यौं। गणतन्त्र ल्याउन दु:ख हामीले गर्यौ तर पछि नारायणकाजी कताबाट फुत्त आए थाहा भएन । त्यसैले उनी माओवादी नै हैनन्’ भट्टराईले भने ।
आफ्नो उम्मेदवारी कसैका विरुद्ध नभई गोर्खाली जनताको पक्षमा भएको भट्टराईले बताए । नेपाली काँग्रेस २००७ सालदेखि नै लोकतन्त्रको निम्ति संघर्ष गर्दै आएको पार्टीसँग चुनावी तालमेल हुनु नौलो बिषय नभएको भट्टराईको तर्क थियो । १२ बुँदे समझदारीको हिस्सेदार पार्टीभएकाले गोर्खाली जनताको मर्म अनुसार नै यस क्षेत्रमा तालमेल भएको डा. भट्टराईको जिकिर थियो। मनोनयन दर्ता भए सँगै हेभिवेट क्षेत्रको रुपमा गोरखा २ को सुरु देखि नै चर्चा चलिरहेको छ।